Gbasara Anyị | Hebei Huasheng Felt Co., Ltd.
E hiwere Hebei Huasheng Felt Co., Ltd dị ka nnukwu ụlọ ọrụ aka ọrụ buru ibu, akwa a na-eteghị akwa na 1970, ọ dịkwa na Nangong & Shijiazhuang, China. Anyị bụ mba dị n’ọkpụkpụ nke ụlọ ọrụ akwa a na-anaghị akpa na China, na onye nrụpụta ihe nkwado nke China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380). Ma tinye ụlọ ọrụ mbubata na mbupụ: SJZ SINO-SAINT INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, a na-ebuga ngwaahịa ndị ahụ gaa n'ụwa niile.
Ekpuchi mpaghara 11,000sqm ma nwee osisi 2, ugbu a anyị na - emepụta ụdị ngwaahịa 3 kachasị:
Otu, Mkpịsị aka gbara emetụ, tinyere polyester chere, ajị anụ ahụ, mmetụta acrylic, mmetụta viscose, carbon carbon, PP chere, akụrụngwa mmetụta, ire ọkụ na-efe efe, mmiri mgbapụta nwere mmetụta, wdg.
Abụọ, owu nwere mmetụta, gụnyere mpempe akwụkwọ nwere mmetụta ajị anụ, ajị anụ nwere mpịakọta, ajị anụ nwere mmetụta, wdg.
Atọ, ngwaahịa nrụpụta, tinyere PVC dotted anti slip chere, Singeing chere, ebie mmetụta, akpa mmetụta, mmetụta ịchọ mma, wdg.
Companylọ ọrụ anyị akwadebela ụdị mmepụta dị elu dị ka mba ụwa si dị
ụkpụrụ. Ma nwere laser cut, stamping, singeing, na mmiri na ngwaọrụ ndị ọzọ na nhazi. Ngwa nnwale a nwere igwe dijitalụ, ihe na-ahụ ọkụ elektrik, ihe nchọpụta, wdg, nke na-ekwe nkwa nke ọma na ngwaahịa ndị ahụ kwekọrọ na European Union na United States.
Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ anyị agafeela ISO9001 na ISO14001 ogo mba na asambodo sistemụ nchịkwa gburugburu ebe obibi. Na ngwaahịa niile agafeela asambodo CE, RACH, RoHS, wdg site na TUV, SGS.
Site na ike OEM / ODM pụtara ìhè, ịdị mma nke ụda, atụmatụ ọhụụ, ọnụahịa asọmpi na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, anyị enwetala otuto ọhaneze nke ọma n'etiti ndị mmekọ ụwa niile. Iji nweta ihe ọmụma ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị ugbu a.
Ihe ngosi & nleta ndị ahịa